> Resource> Naghachi> Memorex Data Recovery: Olee naghachi Data si Memorex nchekwa na ngwaọrụ
Enwere m ike Naghachi Data si Memorex Njem Drive?
M na-eji ihe 8GB Njem Drive enweghị nke ruo ogologo oge. Nke a ụtụtụ na ọtụtụ n'ime m nchekwa na ọ nwekwaghị. Ha na na na echekwara na m Njem Drive ihe 6-7 ọnwa. Gịnị bụ weird bụ na ndị nile nke nchekwa wee pụọ, naanị 6 ma ọ bụ nke 7 nke m kasị nso nso emelitere. Bụ n'ebe ọ bụla software naghachi data si Memorex Njem Drive?
Ee, e nwere ọtụtụ Memorex data mgbake omume na Ịntanetị na bụ ike inyere gị aka. E nwere nkịtị uche banyere Memorex data ọnwụ nke na mkpa ka ị mara mbụ: otu ugboro data na-efu gị Memorex Njem Drive, ọ bụ ka na ngwaọrụ gị na ọ dị akara dị ka unreadable data. Tupu ọ bụ overwritten site ọhụrụ data na gị Njem Drive, na ị na yiri ka weghachite ya na a-atọ ndị ọzọ omume.
Ihe kacha mkpa i kwesịrị ime bụ ịkwụsị iji gị Njem Drive na anya n'ihi na a Memorex Njem Drive data mgbake omume na-enyere gị aka ozugbo. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac pụrụ ịbụ nnọọ mma nhọrọ maka gị na-agbake furu efu, ehichapụ, formatting, emerụ, mebiri emebi data gị Memorex Njem Drive USB ma ọ bụ mpụga ike mbanye. Ya Recovers nile di iche iche nke furu efu faịlụ dị ka photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ site na gị Memorex nchekwa na ngwaọrụ ọsọ ọsọ na n'enweghị.
Get a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery omume naghachi data si Memorex Njem Drive ugbu a. Nke a free version-enye gị ohere iṅomi gị Memorex Njem Drive tupu mgbake.
Wondershare Data Recovery Bụ dakọtara na niile Memorex nchekwa ngwaọrụ, gụnyere Njem Drive USB flash mbanye, ndị ọzọ flash draịva, mpụga ike mbanye na ebe nchekwa kaadị.
Igosi Memorex Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ka hazie Memorex Njem Drive data mgbake na Windows version nke usoro ihe omume ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị pụrụ ịgbaso yiri nzọụkwụ na Mac version kwa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi data si Memorex Njem Drive
Dị ka oyiyi n'okpuru ngosipụta, ị nwere 3 mgbake ụzọ ịhọrọ site na mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị. Ị nwere ike ele ntuziaka nke ha nke ọma na window.
Naghachi ehichapụ, furu efu, Ị ma ọ bụ rụrụ arụ faịlụ site na gị Memorex Njem mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" na-amalite.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Memorex Njem Drive
Ebe a gị na mkpa iji họrọ gị Memorex Njem Drive ke window na pịa "Malite" button ka iṅomi faịlụ na ya.
"Kwado Deep iṅomi" bụ ezi nhọrọ maka gị na-agbake data si a formatted Memorex nchekwa na ngwaọrụ.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị Memorex Njem Drive nwere ike-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na Memorex Njem Drive
Mgbe ịgụ isiokwu risịrị, ị nwere ike ịlele hụrụ faịlụ aha ego ole nke gị furu efu data nwere ike gbakee.
Ugbu a, ị nwere ike nye akara hụrụ faịlụ na ị na-aga iji naputa site na gị Memorex Njem Drive na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Iji zere data overwritten, ị ga mma ghara na-natara data gị Memorex Njem Drive n'oge mgbake.
Olee otú Naghachi Pictures si Photo Booth
Flash Kaadị Data Recovery: 3 Nzọụkwụ naghachi Data si Flash Kaadị
Olee otú naghachi faịlụ site MMC (Multimedia Kaadị)